OURmindaNOW: Xarunta Fariinta Kale ee Mindanao, Filibiin - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
OURmindaNOW: Xarunta Fariinta Beddelka ah ee Mindanao, Filibiin
EAI waxay xoojineysaa awooda ururada maxalliga ah si ay u dhisaan adkeysiga xagjirnimada rabshadaha ah ayna ka hortagaan xagjirnimada iyo dadaallada qoritaanka ee kooxaha hubaysan ee Mindanao.
Mashruuca, Filibiin, Xarunta Hawlgelinta Caalamiga ah ee Rand Corporation
EAI waxay xoojinaysaa awooda ururada maxalliga ah si ay u dhisaan adkeysiga xagjirnimada rabshadaha ah ayna ka hortagaan fikradaha iyo dadaallada shaqaalaysiinta ee kooxaha hubaysan ee Mindanao, Koonfurta Philippines. Mashruucan oo ay maalgaliso Waaxda Arimaha Dibada ee Mareykanka ayaa lagu dhisayaa moodalka fariinta fariinta ee EAI ee loogu talagalay ka hortagga xagjirnimada rabshadaha (CVE), kaas oo sidoo kale laga hirgaliyay gudaha Woqooyiga Nigeria iyo Bariga Afrika.
Hubkan dhalinyarada hogaamiya ee Hub ka dhigis ah, ayaa dib loo magacaabay OURmindaNOW (in la isbarbar dhigo Mindanaoans), waxay qaadatay qaab ololeyaal warbaahin bulsho oo firfircoon, aqoon isweydaarsiyo, aqoon-isweydaarsiyo Teknoloji, Tech Camps iyo Hackathons, latalin xagga dhiirrigelinta Nabadda, munaasabadaha wacyigelinta bulshada, soosaarista iyo baahinta barnaamijyada raadiyaha ee ku saabsan xagjirnimada dhalinyarada iyo xoojinta, togan. Fariinta, iyo dhaqanka oo is beddela.
Si wax walba looga barto OURmindaNOW iyo guulaha ay la yaabeen, iska hubi inaad hubiso website!
Istaraatiijiyooyinka Beddelka ah ee Kale
Horraantii mashruuca, shaqaaluhu waxay sameeyeen istiraatiijiyad kale oo fariin ah oo kale waxayna ku dhaqaaqeen howlo wacyigelin ah oo lagu garto laguna garto dadka halista ku jira. Baaritaanku wuxuu naga caawiyay fahamka iyo qiimeynta muuqaalka warbaahinta, gaar ahaan warbaahinta bulshada iyo raadiyaha, khariidadda jilayaasha CVE ee maxalliga ah iyo kuwa saameyn ku leh, iyo aqoonsashada kaqeyb galayaasha barnaamijka iyo iskaashatada. Daraasadani waxay asaas u ahayd abuurista shabakad isbarbar socota / istaraatijiyadda deegaanka si ay u wada xiriiraan ugu waxtarka badan. Iyada oo ay sabab u tahay marxaladda cilmi baarista, waxaan awoodnay in aan qeexno oo khariidno shaqaalaysiinta iyo dadaallada xagjirnimada ee ururada xagjirka ah ee rabshadaha wata, oo aan diyaarinno aaladda loo yaqaan 'CVE tool Kit' oo loogu talagalay in lagu beegsado dadka iyo deegaanka.ta ah oo loo qaybiyey la-hawlgalayaasha iyo xirfad-yaqaannada CVE, oo ay qabtaan laba aqoon-isweydaarsi daneeyayaal ah.
Maaddaama uu mashruucu isbedelay, waxaa si cad loogu abaabuli karaa dhowr hawlood oo muhiim ah.
Tan iyo bilowgii mashruuca, shaqaaluhu waxay xoogga saareen dhisida awooda hoggaamiyeyaasha da'da yar ee la aamini karo iyo kaaliyayaasha si looga hortago ISIS, kooxaha la xiriira, iyo xagjirnimada rabshadaha ah labadaba khadka tooska ah iyo kan gudaha labadaba la aqoonsaday bulshooyinka ay dhibaatadu saameysey si ay u horumariyaan tayada, aaminaadda, iyo dhaqanka luuqada maxaliga ah content. Waxaan la tababaray 10 tababarayaashu inay hogaamiyaan Xeryaha Farsamada Luuqada maxalliga ah ee meelaha la bartilmaameedsanayo ee ku baahsan Mindanao. Tobankan tababarayaal ayaa fure u noqday Saameeyayaasha CVE iyo farriimaha waxayna hadda hogaaminayaan shanta dambe-day Tech Kaamka barnaamijkas meelo kala duwan in ujeedku yahay hawlgeliyaan oo qortaan hogaamiyaasha dhalinyarada iyo jilayaasha CVE. Kaqeybgalayaasha teknolojiyada Tech Camp ayaa laga soo xushay aagga bartilmaameedkas ku saleysan ballan qaadista jira, hawlaha, oo ogaadahogaamiyeyaasha aagagga CVE, saameynta bulshada, tikniyoolajiyada horumarka, tababarka warbaahinta, iyo dhisidda bulshada iyo wada noolaanshaha bulshada.
ka dib markii ay Xeryaha Teknolojiyada, waanu kafiilaynaa sannadlaha ah tartamada hackathon ee ardayda ka qalin jabisay Tech Camp iyo guud ahaan dadweynaha, taas oo shaqsi ahaanuals ayaa sameeya kooxo si loo horumariyo bartilmaameedsiga fariimaha ololayaal iyo tikniyo kale oo ay wadaan xal iyadoo laga jawaabayo CV-ga la aqoonsadayE mawduucyada. Kaqeybgalayaasha Hackathon way istcimaalaan xirfadaha iyo aaladaha laga bartay Xeryaha Farsamada. Mashaariicda guuleysta waxaa la siiyaa deeqo yar oo lagu horumarinayo laguna hirgaliyo ololahas iyo mashruucyo farsamo-wadis ah in Gasho u nugul iyo / ama dhallinyarro farsamo-badbaadin ah sida CVE, tech, iyo bulshadaal beddelo madaxda.
Asxaabta Dhiirrigelinta Nabadda
Sidoo kale dhamaadka Xarun kasta oo Teknoloji, waxaan aqoonsaneynaa 20 sareqabashada ardayda qalin jabisa si nabad loo noqdo Balanqaadion saaxiibbada iyo qaybka qaybgal lixwehel bishii barnaamijka. Waxaan bixinaa la talin joogto ah, ganaax bille ah, iyo taageero sida ay u horumarinayaan una fulinayaan mashruucyo farriineed oo cusub oo CVE ah oo ay ku jiraan istiraatiijiyad farsamo iyo wax ka qabashada ku saleysan bulshada.
Guji sawirada hoose si aad wax uga ogaatid qaar ka mid ah Shaqaalaheenna kor u qaadista Nabadda iyo mashaariicdooda.
Waxaan soo saarnay laba barnaamij oo raadiyo caan ah oo xoojinaya farriimaha nabadeed: Riwaayada 48-aad ee "Saranggola" Riwaayadda iyo barnaamijka 'OURmindaNOW' oo ah Barnaamijka Magazine Radio.
"Saranggola" waxaa loo qaybiyaa saddex mowduuc oo muhiim ah: awoodsiinta dhalinyarada, awoodsiinta haweenka, iyo maamulka.
Bandhigga majaladda "OURminaNOW" wuxuu u qaybsan yahay dhowr qaybood: digniinta wararka nabadda, qaybta bandhigga hadalka ee wareysiyada tooska ah ama taleefanka, dib u eegista mawduucyada Saranggola, iyo tabarucaadka heesaha asalka ah iyo gabayada Tech Tech, wada-hawlgalayaasha, iyo kuwa kale.
Si loo xoojiyo aragtida iyo lahaanshaha maxalliga ah ee himiladeenna ah nabadda iyo horumarka ee Mindanao, waxaan u horseednaa shirarka bulshada iyo wacyigelinta munaasabadaha loogu talagalay in lagu furo fursadaha wada-tashiyada siyaasadeed, wadahadallada nabadda, iyo fadhiyada awood-siinta.
COVID-19 ayaa wax walba beddelay, oo ay ku jiraan barnaamijyadeenna Filibiin. Shaqaalaheena kartida leh iyo kuwa dadaalka badanba kama aysan gaarin wax garaac ah, si kastaba ha noqotee, oo waxay si dhakhso ah u doorteen mudnaanta si ay u abuuraan "COVID-19 Platform Updating." Waxaa laga heli karaa websaydhka OURmindaNOW, barnaamijkani wuxuu bixiyaa xiriiriyeyaal muhiim ah, tirakoobyadii ugu dambeeyay iyo isbeddellada ka socda waddanka oo dhan iyo Mindanao, iyo tan ugu muhiimsan, "Kaararka Bulshada." Waxbadan ka baro Kaararka Bulshada halkan.
Ku biir EAI abuurista qaabab cusub oo loogu beddelayo xagjirnimada bulshada khatarta ku ah adduunka.